android ဖုန်းများအတွက် Koodous Antivirus ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » Koodous Antivirus ကို
Koodous Antivirus ကို APK ကို
Koodous သင်တို့အဘို့လုံးဝမပါကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူ trojans နဲ့, ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်ကြမ်းတမ်းကြော်ငြာတွေနဲ့တူအန္တရာယ်ရှိတဲ့အက်ပ်များမှသင့်ရဲ့ Android device ကိုကာကွယ်ပေးသည်။
Koodous အနေနဲ့ antivirus ကိုဒါပေမယ့်လမ်းပိုကြီးတစ်ခုခုသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် Android applications များထောင်ပေါင်းများစွာ၏အတွက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အပြုအမူကို detect ကြောင်းသုတေသီများ၏ရေးစပ်ထားတဲ့ပွင့်လင်းအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်က app ကို install, Koodous သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးပြီးနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများကစိတ်ပိုင်းဖြတ်သော applications များအသုံးပြုသူအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြသည်။
သင်ပိုမိုအဘယ်သူသည်ယုံကြည်စိတ်ချသလဲ? ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ် malware ကိုထောက်လှမ်းအတွက်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်း detect လုပ်ဖို့ဒီဇိုင်းအနေနဲ့လျှောက်လွှာ?
သငျသညျလုံခြုံမှုအရှိဆုံးလမ်းအတွက်သင့်ရဲ့ Android device ကိုသုံးစွဲဖို့နဲ့သငျသညျအဘယျသို့သငျသညျကို install လုပ်ဖို့အကြောင်းကိုများမှာသင့်ရဲ့တစ်နေ့တာကိုဖျက်ဆီးဖို့မသွားကြောင်းသေချာပါစေရန်အဘို့အ Koodous ပညာရှင်တွေရဲ့အပေါငျးတို့သအသိပညာတတ်၏။
malware များမှတက်ရင်ဆိုင်ရရဲ့သွားကြကုန်အံ့နှင့်ငါတို့အားလုံးကိုအကာအကွယ်ပေးရန် Koodous, လူအပေါင်းတို့၏စုပေါင်းထောက်လှမ်းရေး join ။
Koodous Antivirus ကို